မတ်လ 2019 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: မတ်လ 2019
နေအိမ် > မတ်လ 2019
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ အများစုမှာဘီယာ-မေတ္တာရှင်ခရီးသွားများအတွက်သူတို့၏-လုပ်ဖို့စာရင်းတွင်မြူးနစ်မြင့်မားများ. ဒါဟာ Oktoberfest လည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ပေးထားရဲ့, ဒါပေမယ့် Nockherberg Starkbierfest – မြူးနစ်ခိုင်ခံ့ဘီယာပွဲတော်အပိုတစ်ခုခုယူဆောင်လာ. အဘယ်သူမျှမ, မရလူအစုအဝေး. သင်သည်များစွာသောအဖြစ်ထက်ဝက်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်. But the beer is double the…